१४ वर्षपछि सुल्झियो रानीबारी हत्याकाण्ड – Everest Dainik – News from Nepal
१४ वर्षपछि सुल्झियो रानीबारी हत्याकाण्ड
काठमाडौं, कार्तिक ८ । नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान महाशाखा टेकु, काठमाडौंले १४ वर्ष अगाडि रानीबारीमा भएको हत्याकाण्डको दोषीलाई पक्राउ गरेको छ ।
चितवनको कठार गाविस वडा नं. ४ घर भई रानीबारीमा डेरा गरी बस्ने जीवन लोहनीलाई बागलुङ स्थायी घर भएका हिक्मत हमालले हत्या गरेका थिए ।
हमालले २०६१ साल माघको ११ गते राति ८ गते लोहनीलाई सामाखुसी चोकमा हत्या गरेर फरार रहेको अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले जानकारी दिए ।
लोहनीलाई हत्या गरेपछि हमाल फरार भएका थिए । उनलाई प्रहरीले खोजी गरे पनि पक्राउ गर्न सफल भएको थिएन ।
बागलुङ जिल्लाको देवीस्थान गाविस वडा नं. २ स्थायी घर गंगा हमालका छोरा ३७ वर्षीय हिक्मत हमाललाई प्रहरीले दशैँको टीकाको अर्को दिन कात्तिक ३ गते मध्यान्ह १२ बजे सामाखुसीबाट पक्राउ गरेको एसएसपी सिंहले बताए ।
हिक्मत हमालले हत्या गर्ने बेला जीवन लोहनीको उमेर १८ वर्षको थियो । हिक्मत हमाललाई गोप्य सूचनाका आधारमा महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुको टोलीले सामाखुशीबाट पक्राउ गरेको थियो । हिक्मत हमाललाई कारबाहीका लागि आवश्यक अनुसन्धान चलाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हिक्मत हमालले पछिल्लो समय काठमाडौंमा ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आएका थिए । हिक्मत हमाललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई १४ वर्ष लागेको छ । तर, हिक्मत हमालले प्रहरीलाई यति लामो समय चक्मा दिएपनि अन्तिममा पक्राउ परेका छन् ।
ट्याग्स: Crime, Ranibari murder case